India Business Visa (eVisa India ho an'ny orinasa)
Ny pitsopitsony rehetra, ny takiana, ny fepetra, ny faharetany ary ny mari-pahaizana ilaina izay ilain'ny mpitsidika any India dia resahina eto.
Amin'ny fiavian'ny fanatontoloana, ny fanamafisana ny tsena malalaka, ary ny fanalalahana ny harinkarem-pireneny, India dia nanjary toerana iray izay manana lanja be eo amin'ny tontolon'ny varotra sy ny fandraharahana iraisam-pirenena. Manome ny olona eran'izao tontolo izao ny varotra sy ny raharaham-barotra tsy manam-paharoa ary koa ny harena voajanahary sy ny mpiasa mahay. Izany rehetra izany dia manintona sy manintona an'i India eo imason'ny olona manao raharaham-barotra sy orinasa erak'izao tontolo izao. Ny olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao liana amin'ny fitantanana orinasa any India dia afaka manao izany mora foana satria ny Governemanta India dia manome elektronika na e-Visa natokana ho an'ny tanjona ara-barotra. Ianao dia afaka mangataka amin'ny Business Visa ho an'i India an-tserasera fa tsy mila mankany amin'ny Masoivohon'i India eo an-toerana mba hanao izany.
Fepetra takiana amin'ny Visa ho an'ny asa any India:
Ny Indian Business Visa dia mahatonga ny fitantanana orinasa any India ho asa mora kokoa ho an'ireo mpitsidika iraisam-pirenena ao amin'ny firenena izay eto amin'ny sehatry ny asa nefa mila mahafeno fepetra voafetra izy ireo hahafahany mahazo ilay orinasa e-Visa. Afaka mijanona mandritra ny 180 andro tsy tapaka any amin'ny firenena amin'ny Visa Orinasa Indianina fotsiny ianao. Na izany aza, manan-kery mandritra ny herintaona na 365 andro izy io ary a Visa fidirana misimisy, izay midika fa na dia afaka mijanona mandritra ny 180 andro aza amin'ny fotoana iray eto amin'ny firenena ianao dia afaka miditra amin'ny firenena imbetsaka raha mbola manan-kery ny e-Visa. Araka ny tondroin'ny anarany, azonao atao ihany ny mahazo izany raha toa ka ara-barotra ny toetoetran'ny fitsidihanao ny firenena na misy ifandraisany amin'ny raharaham-barotra. Ary ny Visa hafa rehetra toy ny Tourist Visa dia tsy azo ampiharina koa raha mitsidika orinasa ianao. Ankoatr'ireo fepetra takiana amin'ny fahazoan-dàlana ho an'ny Business Visa ho an'i India, dia mila mahafeno ny fepetra takiana amin'ny e-Visa amin'ny ankapobeny koa ianao, ary raha manao izany ianao dia ho azonao atao ny mangataka izany.
Fototra azonao ampiharina amin'ny Visa Business India:
Ny Indian Business Visa dia misy ho an'ireo mpitsidika iraisam-pirenena izay mitsidika an'i India ho an'ny tanjona ara-barotra na mifandraika amin'ny karazan'orinasa mikendry ny hahazo tombony. Ireo tanjona ireo dia mety ahitana ny fivarotana na fividianana entana sy serivisy any India, fanatrehana fivoriana fivarotana toa ny fivoriana teknika na fivarotana fivarotana, fananganana orinasa indostrialy na orinasa, fitetezam-paritra, fanolorana lahateny, fanangonana mpiasa, fandraisana anjara amin'ny foibe ara-barotra sy fampirantiana ary fampirantiana. , ary tonga any amin'ny firenena ho manam-pahaizana na manam-pahaizana manokana amin'ny tetikasa ara-barotra sasany. Noho izany, be dia be ny antony ahafahanao mitady ny Business Visa ho an'i India raha toa ka mifandray amin'ny tetik'asa ara-barotra na orinasa izy rehetra.
Fepetra takiana amin'ny Visa any India Business:
Ny ankamaroan'ny fepetra takiana amin'ny fangatahana Visa any India dia mitovy amin'ny an'ny Visa e-visa hafa. Anisan'izany ny kopia elektronika na notarafina tamin'ny pejy voalohany (biografika) an'ny pasipaoron'ny mpitsidika, izay tsy maintsy ilay pasipaoro mahazatra, tsy diplaomatika na karazana pasipaoro hafa, ary tsy maintsy mijanona mandritra ny 6 volana farafahakeliny hatramin'ny andro nidirana tao India, raha tsy izany dia mila manavao ny pasipaoronao ianao. Ny fepetra takiana hafa dia ny kopian'ny sarin'ny lokon'ny mpitsidika ny fomba fandefasana pasipaoro, adiresy mailaka miasa, ary carte de debit na carte de crédit amin'ny fandoavana ny sarany fangatahana. Ny fepetra takiana manokana amin'ny Visa Business Indian dia ny antsipiriany momba ny fikambanana indianina na foara fivarotana na fampirantiana izay hotsidihin'ny mpandeha, ao anatin'izany ny anarana sy ny adiresin'ny referansa karana, ny tranokalan'ny orinasa indianina hitsidika ilay mpandeha, taratasy fanasana avy amin'ny orinasa indiana, ary ny karatra fandraharahana na sonia mailaka ary koa ny adiresy tranokalan'ny mpitsidika. Ho takiana aminao ihany koa ny fanananao a tapakila miverina na mandroso ivelan'ny firenena.
Tokony hangataka Visa Business for India farafaharatsiny ianao 4-7 andro mialoha ny sidinao na ny andro nidiranao tao amin'ny firenena. Na dia tsy mitaky anao hitsidika ny Masoivoho Indianina aza ny e-Visa, dia tokony ho azonao antoka fa manana pejy banga roa ny pasipaoronao hijanonan'ny mpiasan'ny fifindra-monina ao amin'ny seranam-piaramanidina. Toy ny e-Visa hafa, ny tompon'ny Visa Business Indian dia tsy maintsy miditra ao amin'ny firenena avy any Lahatsoratra momba ny fanaraha-maso ny fifindra-monina izay misy seranam-piaramanidina 28 sy seranan-tsambo miisa 5 ary ny mpihazona dia tsy maintsy mivoaka avy ao amin'ny Poste de Immigration Check izay ekena koa.
Izay ihany no tokony ho fantatrao mba hahalalanao raha mahafeno fepetra amin'ny Visa Business India ianao ary inona no takiana aminao rehefa mangataka izany ianao. Fantatra izany rehetra izany, azonao atao ny mangataka mora foana amin'ny Business Visa ho an'i India izay fangatahana fangatahana dia tsotra sy tsotra ary raha mahafeno ny fepetra takiana ianao ary manana ny zavatra rehetra takiana aminao hangataka izany dia tsy hahita olana amin'ny fangatahana ianao. Raha toa kosa ka mila fanazavana ianao tokony Mifandraisa aminay amin'ny helpdesk ho fanohanana sy fitarihana.
Raha ho tonga Visa mpizahatany ianao dia zahao ny takiana Visa fizahan-tany any India.